Goorma ayey tahay inaad dib u naqshadeyso astaantaada? | Martech Zone
Kooxda ka socota Naqshado Nadiif ah waxay daabaceen sawir gacmeedkan quruxda badan oo ay la socdaan fikradaha qaarkood ee ku saabsan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato dib u qaabeynta astaanta, sababaha ay tahay inaad dib u naqshadeynta u sameyso, qaar ka mid ah sameynta iyo yeelida dib u qaabeynta, qaar ka mid ah qaladaadka dib u naqshadeynta calaamadaha, iyo xoogaa jawaab celin ah oo ay ka helaan khubarada warshadaha.
Saddex Afar Sababood oo dib loogu naqshadeeyo astaantaada
Mideynta Shirkadda - isku darka, la wareegida, ama shirkadaha wareejinta shirkaduhu waxay badanaa u baahan doonaan astaan ​​cusub oo astaan ​​u noqota shirkadda cusub.
Shirkaddu wey ka Gudubtaa Aqoonsigeeda Asalka ah - shirkad balaarinaysa dalabkeeda, sida soo bandhigida alaabooyin cusub, adeegyo, iwm.
Soo nooleynta Shirkadda - shirkado in badan soo jiray oo u baahan kara astaan.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro sabab kale! Muuqaalada moobiilka iyo shaashadda sare ee shaashadda dhijitaalka ah ayaa gebi ahaanba beddelay sida astaantaada loo arko. Way dhammaadeen maalmihii hubinta astaantaadu inay u egtahay mid madow iyo caddaan ah mashiin fakis ah.
Maalmahan, oo leh favicon ayaa loo baahan yahay laakiin waxaa kaliya lagu eegi karaa 16 pixels 16pixels… oo aan macquul aheyn in sifiican loo arko. Waxaana laga yaabaa inay u sii socoto illaa sawir ku saabsan muuqaalka isha oo ah 227 pixels halkii inji. Taasi waxay u baahan tahay xoogaa naqshad naqshad qurux badan si loo saxo. Ka faa'iideysiga shaashadda qeexitaanka sare waa sabab sax ah, feker ahaanteyda, si loo helo astaan ​​cusub oo la horumariyo!
Haddii aadan dib u naqshadeyn astaantaada dhowrkii sano ee la soo dhaafay, astaantaadu waxay u muuqan kartaa mid gabowday qof kasta oo cilmi baaris ku sameynaya khadka tooska ah (taas oo ku saabsan qof walba!).
Tags: clearviewastaanta astaantadib u naqshadeynta astaantalogo dib u naqshadeynta infographicuhabeynta